Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya oo Sheegtay in Boqolaal Soomaali ah la dilay | SAHAN ONLINE
Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya oo Sheegtay in Boqolaal Soomaali ah la dilay
JIG JIGA – Wasiirka Isboortiga Iyo Dhalinyarada ahna La Taliyaha Arrimaha Saxaafadda ee Madaxweynaha, Maxamed Bille”Miig” oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in dad Soomaali ah oo badan lagu laayay deegaanada xuduudaha ee ay wadaagaan maamulada Soomaalida iyo Oromada Itoobiya.
Wasiirka ayaa falkaas ku eedeeyey ciidamada maamulka Oromiya,wuxuuna hadalkiisa ku daray”Dhimasho aad u farobadan ayaa jirta, boqolaal ayay gaarayaan dadka dhintay, hanti badana waa ay ku burburtay, maadaamaa waxa shaqadan fulinaya uu ciidan yahay, dad badan ayaa ku naf waayay” ayuu yiri wasiir Maxamed Bille.
Mar uu ka hadlayey cidda dilka gaysatay ayuu sheegay” Waxaa markasta weerarada soo qaadaya waa ciidamada booliiska Oromiya, meelaha aan xuduudaha ka leenahay shacabka degan ayay kusoo qaadaan, iyada oo dadka shacabka ee Soomaalida ah ee halkaas degen ay yihiin dad nabadgelyada jecel, waxayna soo weeraraan iyaga oo qaabaysan oo nidaam dowlad ku socda, dad badan ayaana ku naf waayay, dad kalana waa la barokiciyay”.
Wasiirka hadalkiisa ayaa ka dambeeyey kadib markii shalay dad Soomaali ah oo aanan tiradooda la xaqiijin lagu laayey deegaanka Hawaday ee Qaadka laga beero ee u dhow magaalada Harar.
Maamulka Oromiya kama aysan hadlain eedeymaha loo jeediyey iyo weliba waxa wacay toona illaa hadda.
Wararkii u dambeeyey waxa ay sheegayaan in xiisadaha ay sii-faafayaan.
Xiisada ayaa saameysay dhaq-dhaqaaqa ganacsiga gaar ahaana Qaadka,waxaana gebi ahaanba joogsaday Qaadkii tagi jiray deegaanada Somaliland ee ka iman jiray beeraha Qaadka ee deegaanka Hawaday oo ah halka uu dilku ka dhacay.
Illaa hadda majirto illo madax bannaan oo noo xaqiijiyey tirada Soomaalida la dilau iyo sababta dilka keentay hase yeeshee Itoobiya waxaa ka jira Kacdoon ay sameynayaan qoowmiyadaha Oromada iyo qowmiyado kale ,halka Soomaalida aysan qayb ka ahayn Kacdoonkaas dowladda looga soo horjeedo.